Iintlobo ezahlukeneyo zoBuchule boBantu boThathu
Ngomsebenzi weengcamango okanye ukungafihli , imbono yesithathu yomntu ibonisa iziganeko usebenzisa izibhengezo zomntu wesithathu ezifana naye, yena kunye nabo .
Kukho iintlobo ezintathu eziphambili zombono wesithathu:
Injongo yesithathu yomntu : iimbali zengxelo zichazwe ngumntu obonakala engathathi hlangothi, ongabonakaliyo okanye umrekhodi. Ngokomzekelo, bona "Ukuphakama kwePancho Villa" nguJohn Reed.
Umntu wesithathu-umntu owaziyo: umlandeli owaziyo kuphela ubika iingxelo kodwa angachazela imimangaliso aze axele iingcamango neemvakalelo zalo nawuphi na umlingiswa . Iimveli zakwaMiddlemarch nguGeorge Eliot kunye ne- Charlotte yeWebhu nge-EB White isebenzisa umbono we-third-person-omniscient of view.
I-Third-Person Limited : umbalisi ubika iingxelo kwaye aguqulele iziganeko ngokubhekiselele kumbono omnye. Ngokomzekelo, khangela ibali elifutshane likaKatherine Mansfield "Miss Brill."
Ukongezelela, umbhali unokuxhomekeka kumbono wesithathu okanye umntu ochaseneyo nombono womntu wesithathu, apho umbono uvela kwi-character one ukuya kwelinye iqela ngexesha lokulandelana.
"Ngeminyaka elilishumi elinesibhozo ndandigqoke ngokugqithiseleyo kwaye ndikhangeleka, ndijikeleza ndicinga ngedwa kumntu wesithathu ." U-Allen Dow ujikeleza esitalato nasekhaya. 'U-Allen Dow wamomotheka ngokumomotheka.' "
(UJohn Updike, "Uhambo lokuhamba." Iindaba zakuqala: 1953-1975 . I-Random House, 2003)
"Bonke bakhumbula, okanye bacinga ukuba bakhumbula, ukuba babone njani ibhola le-Snowball belihlawule phambi kwabo kwi-Battle of the Cowshed, indlela awayeyidityanise ngayo kwaye yabakhuthaza ngazo zonke iindawo, nendlela engazange ayimise okwesikhashana nangona i-pellets evela kwisibhamu sikaJones wayemlimazile. "
"Ikhwelo likhwaza kwenkomo esondeleyo ukuba uWilbur ukhululekile, kwaye kungekudala zonke iinkomo zazi." Emva koko enye yeenkomo yatsho enye yezimvu, kwaye kungekudala zonke izimvu zazi, kwizitrato zabo kwintlanzi, bawaphulaphula iindlebe zabo xa beva ukukhwaza; kwaye kungekudala amahashe ayebambelele kwinto eyenzekayo. "
Umlobi njengekhamera yefilimu
Umbono womntu wesithathu unombono wokuvumela ukuba umbhali abe njengekhamera ye-movie ehamba kuyo nayiphi na isethi kunye nokurekhoda nayiphi na isiganeko, ngokude nje omnye wabalinganiswa ugoba ikhamera. , kodwa uqaphele - yenza njalo okanye ungathandeki, kwaye uya kulahlekelwa ngumfundi wakho ngokukhawuleza. Xa usebenzisa umntu wesithathu, ungangeni kwiintloko zabalinganiswa bakho ukuze ubonise umfundi ukuba acinge iingcamango zabo; umfundi ukuba afumane ezo ngcamango. "
(Bob Mayer, i -Novel Writer's Toolkit: Isikhokelo sokubhala iiNveli kunye nokuPapashwa kweencwadi ze-Writer's Digest Books, 2003)
Umntu wesithathu kwiNgcaciso
" Ukungabonakali komntu, umntu ongowona wesithathu unombono ongeyena obalaseleyo njengenjongo." Ingongoma ekhethiweyo yeengxelo , amaphepha ophando , okanye amanqaku malunga nesifundo esithile okanye i-cast characters . kunye neleta egameni leqela okanye isikhungo. Bona indlela ukutshintsha okufutshane kwinqanaba lembono kwakha ngokwaneleyo umehluko ukuphakamisa amaconsi ngaphezu kwesibini kwezi zivakalisi ezibini: 'UVictoria Secret uthanda ukukunika isaphulelo kuzo zonke iibrafu kunye neentente . ' (Nandi, umntu wesithathu ongeyena mntu.) 'Ndingathanda ukukunika isaphulelo kuzo zonke iibras kunye neepasties.' (Hmmm.
Yinjani injongo?). . .
"Ukuzithoba komntu ongathandabuzekiyo kunokuba kuhle kwiimemori ezidumiweyo kwi-incest and in-Beltway intliziyo, kodwa umntu wesithathu umbono wembono uhlala umgangatho kwiindaba zengxelo kunye nokubhala okujolise ukuzisa, kuba kugcina kugxininiswe umlobi kunye nesihloko. "
(IConstance Hale, iSin kunye ne-Syntax: Indlela yokuCwangcisa iPower Prose Impact .
Igunya loLuntu lweThathu lokuBonwa
Izwi lomntu wesithathu lenza umgama omkhulu phakathi kombhali nomfundi. Ukusetyenziswa kwalowo mntu ugrama kumemezela ukuba umbhali walo, nangaliphi na isizathu, akakwazi ukufumana ubungqina obusondeleyo nabaphulaphuli .Umntu wesithathu ufanelekile xa umntu othanda ukuzimisela negunya okanye xa efuna ukucima ilizwi lakhe ukuze loo nto ibonakale ifakwe ngokuchaseneyo njengoko kunokwenzeka.
Kwintetho yesithathu yomntu ubudlelwane bobabini kunye nabaphulaphuli kumbandela oxoxwe ngawo kubaluleke ngaphezu kobudlelwane phakathi kwabo. . . .
"Abafundi bavame ukusebenzisa umntu wesithathu xa bebhalela ootitshala kwiingcamango ezichanekileyo ukuba umgama osemthethweni ukhokelela igunya kumsebenzi wabo kwaye ukuba kufanelekile kwiimeko ezixhomekeke kwiindawo zokufundela."
(USharon Crowley kunye noDebra Hawhee, i- Ancient Rhetorics yabaFundi beeNkcazo , u-3 u-Pearson, 2004)
Ingxoxo Yakho kunye Neyodwa
"Amagama athi 'umlandeli womntu wesithathu' kwaye 'umlandeli womntu wokuqala' awamanga, njengokuba zibonisa ukungabikho ngokupheleleyo kwezibhengezo zomntu wokuqala 'kumanqaku omntu wesithathu.' [Nomi] UTamir (1976) ukhombisa ukutshintshwa kwegama elithi 'lokuqala neyesithathu' ngomxholo womntu siqu kunye nomntu ongenamntu, ngokulandelanayo ukuba ngaba isithethi / isithethi esisesikweni sombhalo ubhekisele kuye (oko kukuthi Umlandeli uthatha inxaxheba kwiimeko ezazivakalisayo), ngoko ke itekisi ibhekwa njengentetho yomntu, ngokutsho kukaTamir. Ukuba, ngakolunye uhlangothi, isithethi / isithethi esisesikweni asibheki kwintetho , ngoko itekisi ibhekwa njengentetho engekho. "
(USusan Ehrlich, iNdawo yokuBona .Routledge, 1990)
UDkt Isobel "Izzie" uStevens: I- Izzie no-Alex banesigulane esithetha kuphela ngaye ngomntu wesithathu.
UDkt. Alex Karev: Baye bacinga ukuba kwakucasulayo ekuqaleni, kodwa ngoku bafana nabo.
(UKatherine Heigl noYusten Chambers "Bakhangela ngeLanga." I- Gray's Anatomy , 2006)
Eyaziwayo Njengaye: imbono engabonakaliyo, inkulumo engabonakaliyo
Yintoni Ubhaliso lobuGcisa?
Uvela phi igama igama elithi Patel?